China 10 nchebe nchebe na-enweghị atụ na nkọwapụta na ndị nrụpụta ọrụ ha na ndị na-eweta ọrụ | Joysun
Aka bụ akụkụ dị oke mkpa nke ahụ anyị, na ọrụ na ndụ enweghị ike ịhapụ ya. Site na mgbe a mụrụ anyị, rue na njedebe nke ndụ, aka na-agagharị mgbe niile. Ọ bụ ihe nwute na anyị na-elegharakarị mkpa ya na nchedo nke aka anyị anya, nke mere na na ụlọ ọrụ nke oge a, ihe mberede mmerụ aka amụbaala nke ukwuu, na mmerụ aka na-aza maka mmerụ aka n'ụdị dị iche iche nke ihe mberede metụtara ọrụ 20%. Nke a bụ data dị egwu, yabụ nhọrọ ziri ezi na ojiji nke mkpuchi aka dị ezigbo mkpa.
Enwere ike ịkọwa ọnyá na-ejikarị aka na atọ, ya bụ mmerụ ahụ, mmerụ ahụ na mmerụ ahụ.
Injury Ọrịa, oke okpomọkụ, obere okpomọkụ, electromagnetic, radiation radiation, ihe ọkụkụ na ihe kpatara ya kpatara mmerụ ahụ. Ọ nwere mmetụta dị ukwuu na ọkpụkpụ, akwara, anụ ahụ na ụlọ ọrụ, mgbaji mkpịsị aka siri ike, mgbaji ọkpụkpụ na mkpịsị aka ọcha, wdg.
Damage Mmebi kemikal na-emebi akpụkpọ aka nke ihe kemịkalụ kpatara, ọ kachasị n'ihi nsị oge na acid na alkalis, dị ka ihe nhicha, disinfectants, wdg, yana ikpughe ụfọdụ ọgwụ kemịkal dị oke egwu.
Injury Nmerụ ahụ dị nfe dị mfe nghọta, nke bụ isi bụ ọrịa na-ebute ọrịa na-akpata ọrịa.
Otu esi zere mmerụ aka ndị a bụ iji gloves nchedo n'ụzọ ziri ezi ma nwee ezi uche n'ọrụ. Ugbu a kọwaa nke ọma 10 nchebe aka nkịtị iji nyere gị aka ịhọrọ ezigbo aka.
Typedị nke mbụ: mkpuchi mkpuchi
A na-eji uwe a gwara mmanụ maka ọrụ ndụ. Na volta AC nke 10 kV ma ọ bụ ngwa eletriki DC kwekọrọ, yi uwe aka mkpuchi nwere ike ịrụ ọrụ mkpuchi eletriki. Dị ka mkpuchi mkpuchi, ọ ga-enwerịrị njirimara mkpuchi dị mma, na ike mgbatị, elongation na ezumike, mgbapu mgbapu, nguzogide ịka nká, nguzogide okpomọkụ dị ala na nguzogide ire ọkụ dị ezigbo mma. Ọdịdị na teknụzụ nke uwe ga-emerịrị ihe achọrọ nke "Ọnọdụ Nka na Nzuzo maka Mkpịsị aka Gọọmenti Maka Arụ Ọrụ", na imepụta nrụpụta siri ike nwere ike nweta ikike nchebe achọrọ iji zere ọnwụ n'ihi oke ọkụ ọkụ eletrik.
Typedị nke abụọ: ogwe aka na-eguzogide ọgwụ
Bee ndị na-eguzogide ọgwụ na-ejikarị eme ihe na ụlọ ọrụ ndị dịka nhazi igwe, ụlọ ọrụ ígwè, ụlọ ọrụ ịgba ígwè, ụlọ ọrụ iko na ụlọ ọrụ efere nchara iji gbochie ihe ndị dị nkọ ịkụ ma ọ bụ belata aka. A na-ejikarị ya eme ihe na eriri ndị ọzọ na-emepụta akwa akwa akwa, ugbu a bụ ihe kachasị eji eme ihe bụ ụlọ ọrụ US DuPont Kevlar. Ihe Kevlar bụ ụdị eriri aramid. Uwe a na-eguzogide ọgwụ na-eguzogide ya mere ka ọ dị nro karịa ngwaahịa akpụkpọ anụ, ma nwee nguzogide ọkụ ka mma, nguzo ọkụ, belata nkwụsị na iyi mgbochi. Ihe Kevlar bụkwa ihe a na-ahụkarị maka ekike agha, yana arụmọrụ nchedo ya bụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi.
Typedị nke atọ: akwa okpomọkụ na-eguzogide ire ọkụ retardant gloves
Igwe na-eguzogide ọkụ na-eguzogide ọkụ dị elu ọ bụ nchekwa na-echebe nke ejiri ya na gburugburu ebe obibi dị elu, nke a na-ejikarị agbaze ndị na-arụ ọrụ ọkụ ma ọ bụ ụdị ọkụ ndị ọzọ. Ọ nwere ụdị atọ, otu bụ kwaaji retardant kwaaji dị ka uwe aka uwe, na etiti ya na polyurethane dị ka mkpuchi mkpuchi oyi akwa; a na-eji nke asbestos mee nke ọzọ dị ka akwa mkpuchi mkpuchi okpomọkụ, ma n’èzí ka e ji akwa ire ọkụ na-ere dị ka akwa; n'ikpeazụ Otu bụ ịgba metal n'elu akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ, nke nwere ike iguzogide okpomọkụ dị elu na ire ọkụ ma nwee ike igosipụta okpomọkụ na-enwu gbaa. High okpomọkụ eguzogide ire ọkụ retardant uwe dị na atọ nha, nnukwu, ọkara na obere, nke na-ekewa abụọ mkpịsị aka ụdị na mkpịsị aka ise ụdị.
Anọ: mgbochi static uwe
A na-ejikarị ogwe aka na-eme ihe na-eme ka eriri kpuchie ya, ma nwee ike iji eriri na-agbanwe agbanwe. Needsdị glove nke abụọ kwesịrị ka ejikọtara ya na resin polyurethane na akụkụ nkwụ, ma ọ bụ jiri resị polyurethane na akụkụ mkpịsị aka ma ọ bụ jiri mkpuchi polyethylene dị n'elu glove. Uwe eji eriri eji eme ihe nwere ike igbasa ngwa ngwa ọkụ eletrik a gbakọtara na aka. Typedị uwe nke abụọ nke mkpuchi polyurethane ma ọ bụ polyethylene abụghị nke dị mfe iji mepụta uzuzu na ọkụ eletrik. Anti-static uwe na-akasị ji maka ngwaahịa nnyocha, ebi akwụkwọ, electronic ngwaahịa, na-adịghị ike ugbu a, nzukọ nke nkenke ngwá na nnyocha ọrụ nke dị iche iche nnyocha oru.
Nke ise: Welder gloves
Welder gloves ọ bụ ngwá ọrụ nchekwa iji gbochie oke okpomọkụ, ọla a wụrụ awụ ma ọ bụ ọkụ na-enwu ọkụ n'aka n'oge ịgbado ọkụ. Ihe nchoputa nke welder gloves siri ike, na ọdịiche dị n'etiti ngwaahịa mbụ na nke abụọ. Ngwaahịa nke mbụ na-achọ ahụ akpụkpọ anụ ahụ ka ọ dịrị n'otu na ọkpụrụkpụ, plump, dị nro na agbanwe. Ejiri akpụkpọ anụ dị mma, edo edo, siri ike, na agbanwe agbanwe na agba, na-enweghị mmetụta griiz; akpụkpọ ahụ adịghị enwe mmezigharị zuru ezu, akpụkpọ anụ ahụ dị oke, na agba dị ntakịrị ọchịchịrị. Ọkwa nke abụọ. Welder gloves na-abụkarị nke ehi, pig tamarin ma ọ bụ akpụkpọ anụ abụọ, ma kewaa ya na ụdị mkpịsị aka abụọ, ụdị mkpịsị aka atọ na ụdị mkpịsị aka ise dịka ọdịiche nke ụdị mkpịsị aka. Welder gloves nwere ike mgbe ụfọdụ mee ka elu okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ gloves.
Thdị nke isii: mgbochi vibration gloves
A na-eji gloves ndị na-eme ka a mata jijiji gbochie ọrịa ndị ọrụ na-akpata jijiji ji akpata. N'ime oke ohia, iwu ulo, Ngwuputa, njem na ngalaba ndi ozo maka ihe ndi ozo di iche iche dika ihe ndi ozo, igwe ndi na-egwu egwu ya na ike nke oria oru - - "oria nkpuru aka." Uwe ndị a na-agbakwunye otu ụfụfụ ụfụfụ, latex na ikuku ikuku na elu nkwụ iji banye vibration. Ihe nkpuchi nkwụ na mkpịsị aka na-ebuwanye ibu, ụda ikuku dị ukwuu, na mmetụta dị mma ka mma, mana ọ dị mfe imetụta ọrụ ahụ.
Asaa: acid na alkali na-eguzogide ọgwụ gloves
Acid na alkali na-eguzogide ọgwụ gloves nwere ike kere n'ime roba acid na alkali na-eguzogide ọgwụ uwe, plastic acid na alkali na-eguzogide ọgwụ uwe, latex acid na alkali eguzogide ọgwụ, plastic impregnated acid na alkali eguzogide ọgwụ, wdg dị ka ihe. Ọ bụ ngwaahịa na-echebe iji gbochie acid na alkali ịmerụ aka. A naghị ekwe ka ntụpọ dị ka ntu oyi, ihe na-emebi emebi, nnyapade na mmebi. Ogo kwesiri igbaso ndokwa nke "Acid (Alkali) Gloves". Ihe ọzọ acid na alkali na-eguzogide ọgwụ ga-abụ ikuku ikuku. Na nrụgide ụfọdụ, anaghị anabata ikuku ikuku. Enwere ike dochie gloves na mgbochi antivirus na acid na alkali na-eguzogide ọgwụ, nke nwekwara ezigbo mmetụta.
Nke asatọ: uwe ndị na-eguzogide mmanụ
A na-eji gloves na-eguzogide mmanụ na-echebe akpụkpọ ahụ nke gloves site n'ọrịa akpụkpọ anụ dị iche iche kpatara site na mmanụ. A na-ejikarị roba nitrile, chloroprene ma ọ bụ polyurethane mee uwe ndị a. Fọdụ ndị na-echebara mkpali nke mmanụ na abụba kwesịrị iji gloves na-eguzogide mmanụ iji zere nnukwu dermatitis, acne, akpụkpọ anụ, akpụkpọ akọrọ, ink, na ntu.
Nke itoolu: uwe dị ọcha
Uwe ndị na-enweghị ájá nwere ike igbochi eletrik eletrik mmadụ ka ọ ghara imebi ngwaahịa n'oge usoro mmepụta ahụ, ma bụrụ nke roba. Ọ nwere ike ichedo ngwaahịa a site na mmetọ na mmetụta nke mkpịsị aka mkpịsị aka, uzuzu, ọsụsọ na nsị mmanụ n'oge usoro mmepụta, ma chekwaa ngwaahịa ahụ nke ọma. Uwe a na-ejikarị ájá na-enweghị ntụ na ime ụlọ dị ọcha bụ akwa polyvinyl chloride (PVC).
Enthdị nke iri: mgbochi X -ray gloves
Uwe ogwu X -ray bu uwe ndi ndi oru X -ray jiri aka ha, ha bu nke roba duru karie nke puru inweta ma obu mepu X -rays ma nwee ezigbo ihe. Ndị ọrụ nọ na X -rays chọrọ ya n'ihi na ha na-enweta ụzarị ọkụ X -ray ma na-emerụ ndị mmadụ ahụ karịa. X -rays nwere ike imebi akwara nke sel ma mebie mkpụrụ ndụ mkpụrụ ndụ ihe nketa nke siri ike mmezi, ọ dịkwa mfe ịkpalite kansa. O nwere mmetụ na-egbu egbu na leukocytes ọbara mmadụ, na-ebute ọnụ ọgụgụ, na-ebute mbelata nke ọgụ ahụ, ọ dịkwa mfe ịrịa ọrịa.